သူလဲ ပန်းခရမ်းပြာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home & Garden » သူလဲ ပန်းခရမ်းပြာ…	19
Posted by Ma Ei on Jun 10, 2015 in Home & Garden | 19 comments
ခြံထဲမှာ ခရမ်းပြာရောင်ပွင့်တဲ့ ပန်းပင်ကလေးတစ်ခြုံရှိပါတယ်…
အပင်သေးလေးတွေစုပေါက်တယ်…မျိုးစေ့ကျတဲ့နေရာ အပင်ပေါက်လို့ပွားမြန်တယ်…
ခရမ်းပြာရင့်ရင့်နဲ့ ကန်စွန်းပွင့်လို အပွင့်လေးတွေပွင့်တာ လှလှပပ ပါဘဲ…
တစ်မနက်မှာဘဲ အပွင့်လေးတွေကြွေတတ်တာ နှမြောမိပေမယ့် သဘာဝကိုနော့…
နံမည်တော့ မသိပေမယ့် သူလဲ ပန်းခရမ်းပြာ ပါဘဲနော်…
ခင်ဇော် says: petunia flower လားး??
Ma Ei says: ဟုတ်….
ရှာတွေ့ပြီ…petunia flower တဲ့…
မြန်မာလို နှဲပန်း ပေါ့နော်…
aye.kk says: လှတယ်။
Ma Ei says: ကျေးဇူးပါ အမအေးရယ်…
ကြည်ဆောင်း says: ပန်းခရမ်းပြာ 1 ပုံလေးနဲ့ အောက်ဆုံးကပုံလေး ကနံရံအခံလေးနဲ့လှတယ်
Ma Ma says: အဲဒါအကြိုက်ဆုံးအရောင်ပဲ။
အလေ့ကျပေါက်တဲ့ လမ်းဘေးပန်းတွေမှာလည်း သူ့အလှနဲ့သူရှိကြတယ်။
မအိလည်း ဓာတ်ဆြာတစ်ပါးဖြစ်လာပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လှတယ် မအိရေ
မြစပဲရိုး says: . ဗေဒါမဟုတ်တဲ့ ပန်းခရမ်းပြာပေါ့။
သူ့မှာလဲ သူ့အလှလေး နဲ့။
ဒါပေမဲ့ ဗေဒါ လောက်တော့ အကြမ်းခံ ဟုတ်မှာ မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။
. ကြည့်ရတာ နုနုလေး။
Ma Ei says: ကြည်ဆောင်း …
ပန်းခရမ်းပြာ 1 ကနေ4ထိကအိမ်ကပန်းလေးတွေပါ
အောက်ဆုံးပုံလေးက အင်တာနက်က ရှာထည့်ထားတဲ့
ပန်းကလေး အရောင်လေးရော ပွင့်ပုံလေးပါသဘောကျလို့ သူများခြံကတောင်းစိုက်ထားတာပါ..
သူက ပွင်ပြီး အသီးကနေ မျိုးစေ့ကျတဲ့နေရာ အပင်ပေါက်လို့ပွားမြန်ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် ဆွိ ပြောလို့ ရှာကြည့်လိုက်တော့ petunia flower…မြန်မာလို နှဲပန်း ပါတဲ့…
ပန်းကလေးက လုံးဝကို အထိမခံလေးရယ်…
မနက်ပိုင်းပွင့် ခဏနေကြွေကြရော..ခူးလိုက်ရင်ပိုဆိုး ချက်ခြင်းနွမ်းသွားတာ…
Wow says: အာ့ Forget me not ပန်းဟုတ်ဖူးလား
Ma Ei says: ဟုတ်ဖူးဝါး…
Wow says: ဟီးးး သိပါဝူး ရမ်းတုတ်တာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .မြန်မာလို နှဲပန်း ပေါ့နော်…ဟုတ်ပ..နှဲ နဲ့တူတယ်
Ma Ei says: မြန်မာလို နှဲပန်း လို့ခေါ်တဲ့ ပန်းမျိုးတွေထဲက တစ်မျိုးပါ…
တောင်ပေါ်သား says: အောက်ဆုံးက ပုံလေး မိုက်တယ် ၊
ကျနော်တို့ရုံးမှာ ခရမ်းပြာတွေ အများကြီးပဲဗျ ၊
မိန်းကလေး ယူနီဖေါင်းက ခရမ်းပြာဝမ်းဆက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2283
Ma Ei says: သူတို့လေးတွေလဲ အမြင်လှပ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပန်းခရမ်းပြာလေးတွေပေါ့ကွယ်…
အောင် မိုးသူ says: အဲ့သည်ပန်းက မြန်မာနာမည်ရှိတယ် ပါးစပ်ဖျားတင်မေ့နေတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခင်လေးဆတ်ဆတ်တုန် များလား??
manawphyulay says: ဟုတ်တယ်နော် သူတို့ကျတော့ လူတွေက သိပ်သတိမပြုမိကြဘူး။ ခြံစည်းရိုးမှာ ကပ်ပေါက်နေတာတောင် တက်နင်းချင်ကြသေးတယ်….